Ny Revolisiona Rosiana
Boky momba ny Revolisiona Rosiana
Crossword Revolisiona Rosiana #1
Crossword Revolisiona Rosiana #2
Crossword Revolisiona Rosiana #3
Crossword Revolisiona Rosiana #4
Crossword Revolisiona Rosiana #5
Crossword Revolisiona Rosiana #6
Crossword Revolisiona Rosiana #7
Endrika famantarana ny Revolisiona Rosiana
Rakitra Revolisiona Rosiana
Fanontaniana momba ny revolisiona Rosiana
Grika momba ny Revolisiona Rosiana
Mpahay tantara momba ny Revolisiona Rosiana
Sarintany Revolisiona Rosiana
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana - hetsika 1907-1916
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana - hetsika 1917
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana - hetsika 1918-1924
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana - revolisiona
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana - tsarists
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana: hevitra (I)
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana: hevitra (II)
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana: hetsika 1906 mankany 1913
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana: hetsika 1914 mankany 1916
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana: hetsika ho 1905
Fanadihadiana momba ny Revolisiona Rosiana: hevitra
Mamerina ny fahatsiarovana ny Revolisiona Rosiana
#ZNUMX ny valin'ny Revolisiona Rosiana
Ny Revolisiona Rosiana dia maminavina
Fanamarihana Revolisiona Rosiana
Lohahevitra momba ny Revolisiona Rosiana
Fikomiana Rosiana Rosiana
Revolisiona Rosiana iza no
Teny Revolisiona Rosiana - hevitra
Wordsearch Rosiana Revolisiona - olona
Teny Revolisiona Rosiana - toerana
Revolisiona teny Rosiana Revolisiona
Ny Revolisiona Rosiana dia hetsika tsy fahagagana izay tsy vitan'ny hoe nanova ny làlan'i Rosia ihany koa, dia namorona ny taonjato faha-20 koa eran-tany.
Tamin'ny faran'ny taonjato 20, Rosia dia iray amin'ireo fanjakana lehibe indrindra sy natanjaka indrindra. Ny taniny dia avy tany Eropa ka hatrany Azia ary nitsinjara fahenina ambin'ny folon'izao tontolo izao. Nihoatra ny 100 tapitrisa ny mponina any Rosia izay nitambatra foko sy fiteny samihafa. Ny tafika mijoro milamina aminy no lehibe indrindra eto an-tany.
Na dia eo aza ny halehibeny sy ny heriny lehibe, dia mbola tamin'ny medieval tahaka ny maoderina ny Russia. Lehilahy iray ihany no nofehezin'ny Fanjakana Rosiana, Tsar Nicholas IIizay nino fa ny fahefany ara-politika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny 1905, ny fahefana autokratikan'i Tsar dia notapahin'ireo reformista sy revolisionera mitady hamorona an'i Rosia demokratika maoderina. Tafavoaka velona ny fitondrana taloha ny fanambin'ny 1905 - fa ny hevitra sy ny hery nanala azy dia tsy nanjavona.
Ny Ady Lehibe I nanamontsana ny revolisiona tany Rosia. Tahaka ireo mpanjaka andriana taloha tany Eropa, i Russia dia nirohotra tamin'ny ady tamim-pahavitrihana ary tsy nieritreritra ny valiny. Ny 1917 dia niteraka fahafatesana an-tapitrisany ny ady, nanakorontana ny toe-karena nataon'i Rosia ary nampihena ny fanohanana malaza amin'ny tsar sy ny fitondrany.
Nesorina tamin'ny fahefana i Nicholas ary nosoloana governemanta vonjimaika - saingy ity fitondrana vaovao ity dia niatrika ny fanambin'ny tenany manokana, toy ny fitohizan'ny ady an-trano sy ny fiakaran'ny radicalisme eo amin'ireo saranga miasa. Nisy revolisiona faharoa tamin'ny Oktobra 1917 nametraka an'i Rosia teo am-pelatanan'ny Bolsheviks, sosialista radical izay tarihin'ny Vladimir Lenin.
I Lenin sy ny Bolsheviks dia nanitatra ny hatsaran'ny Marxism ary nampanantena fiarahamonina tsara kokoa ho an'ny sarangan'ny mpiasa. Afaka manome voninahitra sy manatanteraka ireo fampanantenana ireo anefa izy ireo? Afaka manatsara ny fepetra ho an'ny mpiasa ve i Lenin sy ny fitondrany vaovao, rehefa mandresy ny fahavoazan'ny ady ary mitarika an'i Rosia ho amin'ny tontolo maoderina?
Ny tranokalan'ny Revolisiona Rosiana Alpha History dia loharanom-pahalalàna boky momba ny kalitao feno indrindra amin'ny fandalinana ny hetsika any Rosia eo anelanelan'ny 1905 sy 1924. Misy loharano voalohany sy loharano voalohany ihany ao amin'ny 400, ao anatin'izany ny antsipiriany famintinana lohahevitra, antontan-taratasy ary sary mampiseho sary. Ny tranokalanay dia misy ihany koa ny fanazavana momba ny sari- ary sarintany momba ny foto-kevitra, Tantara amin'ny, glossaries, a 'iza no'sy fampahalalana momba historiography ary mpahay tantara. Ny mpianatra dia afaka manandrana ihany koa ny fahalalany ary mampatsiahy azy ireo amin'ny hetsika an-tserasera marobe, anisan'izany Quizzes, crosswords ary wordsearches. Ny loharanom-bokin'ny Kilonga, ny votoatiny rehetra ao amin'ny History History dia nosoratan'ireo mpampianatra, mpanoratra ary mpahay tantara za-draharaha.
Raha ny loharanom-baovao fototra, ny votoatiny rehetra amin'ity tranonkala ity dia © Alpha History 2019. Ity atiny ity dia tsy azo adika, naverina navoaka indray na tsy misy alalana avy amin'ny alalàn'ny Alfa. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana ny tranokalan'i Alpha History sy ny atiny, azafady zahao ny momba anay Fepetra fampiasana.